नेपाली छोरा प्रवल गुरुङ अमेरिकाको भावी राष्ट्रपति उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टका घनिष्ट मित्र !
[ December 12, 2018 ] कतारमा फो–ल्होसारको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरिने	News
[ December 11, 2018 ] गुरुङ समुदाय रोल्पाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र	News
[ December 9, 2018 ] तमु धिं नेपालले विविध कार्यक्रम गरी फो ल्होछार मनाउने	News
[ December 9, 2018 ] बगर तमु समाजले रजत जयन्ती मनाउदै	News
[ December 9, 2018 ] दुधपोखरीको त्रैमासिक साधारणसभा, स्वागत गीत विमोचन र सम्मान तथा छात्रवृति वितरण	News
[ December 9, 2018 ] कङ्ग्युर पाठ वाचन तथा तोनागघोसुम पुजाको तयारी भेला सम्पन्न	News
[ December 7, 2018 ] घान्द्रुकको खोलोभ्रो–कुमाभ्री ग्रामिण सडक निर्माणका लागि हङकङबाट ५ लाख बढी सहयोग	News
[ December 6, 2018 ] सिड्नीका गुरुङले ‘अरुलाई सम्मान हाम्राे पहिचान’ भन्दै ल्हाेछार मनाउँदै	News
[ December 1, 2018 ] भुकम्प प्रभावित धादिङको खादिङमा तमु धिं युकेद्धारा निर्मित विद्यालय भवन उद्घाटन	News
[ November 30, 2018 ] युएईमा तमु ल्होसार कप-२०१८ फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा	News
HomeNewsनेपाली छोरा प्रवल गुरुङ अमेरिकाको भावी राष्ट्रपति उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टका घनिष्ट मित्र !
काठमाडौं, असोज १६ । भावी राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चामा रहेकी विश्कै शक्तिशाली महिला हिलारी क्लिन्टन नेपालकै एक छोरा प्रवल गुरुङकी एक अनन्य मित्र भएको खुल्न आएको छ । प्रवल अहिले बिश्वचर्चित फेसन डिजाइन अर्थात हाइप्रोफाइल डिजाइनर को रुपमा विश्वभरी चिनिन्छन् । यही क्षमताले ती शक्तिशाली महिला अमेरिकाको भावी राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार क्लिन्टन उनको मित्र बन्न पुगेकी हुन् । उनका डिजाइन अमेरिकी राष्ट्रपति पत्नी मिसेलदेखि बेलायती राजकुमारी केटसम्मले लगाएका छन् ।
हिलारी क्लिन्टनसँगको मित्रतालाई अब प्रवलले उनलाई राष्ट्रपति बनाउने अभियानमा लागेर सहयोग गर्नेछन् । चुनावी प्रचारका लागि प्रवलले डिजाइन गरेका टिसर्ट यतिबेला अमेरिकामा खोसाखोस भइरहेको छ । हिलारीलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन उनले डिजाइन गरेको मेड फर हिस्ट्री उल्लेखित रातो टिसर्ट सोल्ड आउट भएको हिलारीको चुनाव अभियानसम्बन्धी वेबसाइटले जनाएको छ । प्रवलले डिजाइन गरेको यो टिसर्टको मूल्य ४५ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
नेपालमा जन्मिएका प्रवल झण्डै डेढ वर्षअघि अमेरिकी नागरिक बनेका थिए । र, अहिले डेमोक्रेटिक उम्मेदवार क्लिन्टनले उनकै विश्व चर्चित ट्यालेन्टलाई चुनावमा प्रयोग गरेकी छन् । प्रवल क्लिन्टनका सेलिब्रेटी सपोर्टरमध्येका एक हुन् । अमेरिकन पत्रिका ‘फास्ट कम्प्यानी’लाई दिएको एक अन्तरवार्तामा प्रवलले आफ्नो समर्थन हिलारीलाई हुनुको कारण खुलाउँदै भने( उनी वर्तमान र विगतका राष्ट्रपति भन्दा योग्य छिन् ।’
क्लिन्टन र गुरुङको मित्रता २०१४ देखि सुरु भएको हो । त्यसबेला एक कार्यक्रममा भेट हुँदा आफूले क्लिन्टनसँग चिनजानका लागि परिचय गर्दा हिलारीले पहिले नै चिनेको बताएकी थिइन् । त्यस्तो सुन्दा प्रवल छक्क परेका थिए । प्रवलले भने ‘उनले मलाई आफ्नो छोरी चेल्सी, (जो गुरुङले डिजाइन गरेको ड्रेस लगाउँछिन्) का कारण आफूले चिन्ने बताइन् ।’
‘मेड फर हिस्ट्री’ फेसन केन्द्रीत प्रोजेक्ट हो, जुन क्लिन्टनले आफ्नो चुनावी अभियानमा सुरु गरेकी छन् । जसमा उनलाई राष्ट्रपति देख्न चाहने सेलिबेटीको हस्ताक्षर स्टाइल प्रयोग गरेर टिसर्ट डिजाइन गरिएको छ । र, टिसर्ट चुनावी अभियानका क्रममा बेचिन्छ ।
हिलारीको टिमसँगको सहमतिपछि प्रवलले सेतो र हरियो फूल बुट्टा भएको रातो टिसर्ट डिजाइन गरेका हुन् ।L
पोखरामा अर्को आधुनिक गुम्बा बन्ने
गुरुङ तमू समाज मकाउको अध्यक्षमा रामेन्द्रकुमार गुरुङ
गौरी तमुको समैं दर्वानी ( समयको दर्पण) मुक्तक संग्रह को लोकर्पण
कतारमा फो–ल्होसारको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरिने
गुरुङ समुदाय रोल्पाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
के तमुहरुको गोत्र हुन्छ ?
तमु धिं नेपालले विविध कार्यक्रम गरी फो ल्होछार मनाउने
बगर तमु समाजले रजत जयन्ती मनाउदै
दुधपोखरीको त्रैमासिक साधारणसभा, स्वागत गीत विमोचन र सम्मान तथा छात्रवृति वितरण
कङ्ग्युर पाठ वाचन तथा तोनागघोसुम पुजाको तयारी भेला सम्पन्न
घान्द्रुकको खोलोभ्रो–कुमाभ्री ग्रामिण सडक निर्माणका लागि हङकङबाट ५ लाख बढी सहयोग
सिड्नीका गुरुङले ‘अरुलाई सम्मान हाम्राे पहिचान’ भन्दै ल्हाेछार मनाउँदै